Isimo ka socda Gobolada SSC oo Casho sharaf loogu sameeyey Kampala+Sawiro – SBC
Isimo ka socda Gobolada SSC oo Casho sharaf loogu sameeyey Kampala+Sawiro
Posted by admin on April 26, 2012 Comments
Wafdiga heerka sare ah ee ka socda Maamulka Khaatumo State oo maalmahan ku sugnaa magaala madaxda dalka Uganda ee Kampala ayaa waxaa casho sharaf loogu sameeyey mid kamid ah Hotelada magaalada oo lagu magcaabo Serena Hotel.
Wafdiga oo ay ka kamid yihiin Isimo iyo madaxda Maamulka ayaa waxaa sidoo kale ku weheliyay Safarkooda Ra’iisal wasaarihii hore ee Soomaaliya Pro. Cali Khaliif Galaydh iyo wasiirkii warfaafinta ee Xukuumadii Farmaajo Cabdi Kariim Jaamac.
Kulanka oo ahaa mid ay isugu yimaadeen waxgaradka, Aqoonyahanada, Culumaa’udiinka, iyo Ganacsatada Beelaha Harti ee degan dalka Uganda ayaa waxaa la isku dhaaftay aragtiyo badan oo dhamaantood ku biyo shubanaya sidii sidii looga shaqayn lahaa Midnimada Beesha.
Caaqilka Beesha Harti ee dalka Uganda Caaqil Daahir Axmeddiini Jaamac oo ugu horayn halkaas ka hadlay ayaa soo dhoweeyey wafdiga ka socda Maamul goboleedka Khaatumo State ee booqashada ku yimi Uganda, waxana uu uga warbixiyay sida Jaaliyada Beesha Harti ee Uganda ay isugu xiranyihiin isla markaana ay uga shaqayaan danaha Umadooda.
Madaxwaynaha Maamul goboleedka Khaatumo State Cabdi Nuur Cilmi Qaaje (Biindhe) oo halkaasi ka hadlay ayaa meesha ka saaray warar uu sheegay in laga faafiyay maamulkiisa oo ahaa in Maamulka khaatumo oo ka shaqaynayo burburinta Beesha Harti, Waxana uu meesha ka saaray in Warkaasi uu yahay waxba kama jiraan isagoona sheegay in uu ka shaqaynayo sidii dadka walaalaha aan Colaad loo dhex dhigin.
Ugaas Cabdulaahi Ciise Nuur oo isna halkaasi ka hadlay ayaa u mahad celiyay dadkii kasoo shaqeeyey xafladan quruxda badan, waxana uu Amaan usoo jeediyay Jaaliyada ku dhaqan dalkan Uganda oo uu sheegay in ay si fiican isugu xirantahay.
Kulanka ayaa sidoo kale waxaa hadal kooban ka jeediyay Ra’iisal wasaarihii ee DKMG ah ee Soomaaliya Pro. Cali Khaliif Galaydh oo ku booriyay Jaaliyada in ay isku doobni muujiyaan isla markaana ay ka shaqeeyaan danaha guud ee dadkooda.
Dhinaca kale waxaa halkaas isna hadalo ka jeediyay Ganacsade Cabdulaahi Yuusuf Aw Cilmi oo ah Wakiilka Dawlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ee dalkan Uganda, Waxana uu ka hadlay sida loogu baahanyahay in wax laga qabto Dhibaatooyinka ka jira Gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn oo uu sheegay in Beesha Caalamku ay 20 sano iyo inkabadan ay u aqoonsatay goboladaas Dhul la isku haysto, taas oo uu sheegay in ay caqabad ku noqotay Gargaarkii la gaarsiin lahaa dadka goboladaas ku dhaqan.
Gebagebadii Xafalada ayaa waxaa Erayo Duco ah kusoo Gunaanaday Ugaas Cabdulaahi Ciise Nuur, isagoona ilaahay uga baryaya in dadka walaalaha ah uu Isjacayl dhex dhigo, Waxayna Xafladu kusoo dhamaatay Jawi farxadeed.
SBC International Uganda
wax wanagsan baakadhacy waxana leyahay midnimada hartiy hala xojiyo meel lagu kala tagayo majirto GUUL KHAATUMO STATE OFSOMALIA
ascw,salam waa aragti wanagsan in umada la dhex dhigi saman lakin qof intii la yaqaney xuman & iska horkeenka umada ka shaqeynayey oo caan ku ah kuna soo shaac baxey ma kula tahay in uu dacad ka yahay manta marka aragtideyda waxay ila tahay in khatumo ay la yimadan aragti hufan oo dadkoda & degankoda dan u ah ee eysan ka shaqeyn colad & naceyb ey dhex dhigan dadka kale ee ey dalka & dad wadaaga ah waxana qabaa in mamulka puntland ey mar walba soo dhaweynayan waxqabad dadka & dalkaas ba mana arko dano siyaasaded oo ay ka leeyihin oo an ka ahayn wada dhalashada walow dadku eysan isku aragti ka ahayn taas sida taariikhda marka dib loo raaco ina c/lle xasan & ina siyaad barre ey ahayd waqti an waxba la xurmeyn ama la iskula harin degamadana eysan waxba ka soo qadin wixii dhacey oo dhibato ka soo gadhey labadas kacaan oo si xun dhib uga soo gadhey waxana arinkaa u soo qatey xalada ey wadan khatumo oo saameysey shacag ssc intoo badan in ey meel xun la geli doonto aakhirka ogada “kursi doon ma ahan degan & dal doon”
waxa yaab leh ninka raisawasaare gaaray oo hada u soo jeensaday in uu lasafto dad aan meelna ahysan war khaatumo xagay joogta balweydiiya odaygaan deegaan la aantu haysato oo meel uu xukumo waayey walee meel magaarto adi iyo kuwa kudaba socdaba
Guul wayn ilaahow harti isukeen oo tus walaaltinimada iyo wada dhalashada “halbooli ahi nirigxalaala madhasho”
libaaxa ssc says:
asc. khaatumo state of somalia, waa mamul ku yimi rabitanka shacabka ku dhaqan gobolada ssc,ka dib dayac iyo nactooyo ay kala kulmeen madaxwaynayaashii maamulkii ay dhisteen ee muruqooda iyo maskaxdodaba geliyeen, (puntland) madaxwaynayashaas oo ololohodii siyasaded gacan lixaadle ka helay bulshada ssc ayaa waxay ugu abaal gudeen inay hoosta ka xariiqaan magalada lasanod iyagoo heshiis hoose la galay melazanawi iyo riyaale oo marka m/wayne ka aha mamulka snm. Taariikhdaasu waa wax yar o ka mida waxyabaha kalifay in khaatumo istaagto,(dhulkagi ana s/land u saxiixay, soo celintiisana dani igama hayso, isku day kastoo aad adigu la timaadana wa inan fashiliya, hadana ma hadli kartide wa inad iska kay daba socotaa.) taasi toliimo maahee waa cadawtinimo. Guul khaatumo, guul r/casayr, guul maakhir, guul puntland, guul galdogob land, guul harti & daarod, guul & midnimo somalia.